'Manneen jireenyaatti dabareen dhiyeessii humna ibsaa har'arraa eegalee ni hafa' - BBC News Afaan Oromoo
'Manneen jireenyaatti dabareen dhiyeessii humna ibsaa har'arraa eegalee ni hafa'
Ministirri bishaan, jallisii fi anniisaa injinar Silashii Baqqalaa (PhD) dhiyeessii humna ibsaa ji'a Bitootessaarraa eegalee dabareen ture ilaalchisee ibsa kennan.
Baaburri dhagaa daaku ganna kana ijaarsi baay'een waan hin jirreef ji'a tokkoof elektriikii akka hin fayyadamne murtaa'era.
Industriiwwan giddugaleessaa fi gurguddaa guyyaa guyyaa anniisaa isaan barbaachisu keessaa harka 50 qofa akka fayyadaman fi halkan sa'aa 5 hanga 11 anniisaa isaan barbaachisu guutummaatti akka fayyadaman murtaa'era.
Itoophiyaan taarifa tajaajila ibsaa dabaluufi
Hammeentaan bishaanii hidha Gibee lakk 3 (kan anniisaa Meggaa waatii 1800 ol maddisiisu) bara kana seene kan yeroo kaanirraa kan xiqqaate ta'uunsaa dhiyeessii humna ibsaa biyyattii irratti miidhaa kan fidee ta'uusaa ministirichi himaniiru.
Hidhawwan Malkaa Waakannaa fi Qooqaas hidhawwan hanqina roobaan miidhamanidha.
Goodayyaa suuraa Injinar Silashii Baqqalaa(PHD)
Kana malees fedhiin itti fayyadama elektriikii bara kana dhibbeentaa 6.3n dabaluunsaa fi hidhawwan karoorfataman xummuramuu dhabuun isaanii rakkoo hanqina anniisaa elektriikif sababa isa biraa ta'uunsaa ibsicharatti himameera.
Rooba cimaa ji'a Waxabajjii roobaa turen hammeentaan bishaanii hidha Gibe lakk 3 waan dabaleef elektriikii achii argannu ni fayyadamna jedhan Dr injinar Silashiin.
Hidhni Gibee lakk 3 humna guutuun anniisaa maddisiisuuf kuufama bishaanii meetira 892 qabaachuu qaba kan jedhan ministirichi yeroo ammaa garuu meetira 830 irra jira jedhan.
Fedhiiin anniisaa elektriikii bara 2012ti dhibbeentaa saddeetin akka guddatu eeggamas jedhan. Hidhni Gannaalle-Daawwaa ijaarsisaa waan xummurameef walakkeessa ji'a Hagayyaatti hojii eegaluun fedhii anniisaa jiru guutuuf akka gumaachu eeggama.
Addaan ciccituu ibsaa bifa itti fufiinsa qabun hambisuuf garuu dhiyeessiin humna ibsaa gahaa ta'e jiraachuu qaba jedhan.
Projektootni ifa aduun anniisaa maddisiisan fi walitti anniisaa MW 800 madisiisuu danda'an jaha adeemsi calbaasii isaanii raawwatamaa akka jirus ministirichi himaniiru.
Hojjettoota humna ibsaan walqabatee rakkoon naamusaa fi malaammaltummaan hojjettoota tokko bira kan jiru ta'u isaa ministirichi dubbatan.
Anniisaa elektriikii biyyaalee Sudaan fi Jibuutiif gurguramaa akka ture fi anniisaan Sudaanitti gurguramaa ture gutumaan guututti dhaabbachuu isaa fi kan Jibuuti immoo dhibbeentaa shantamaan hir'isuuf karoorfatamee sababa baaburri Itoophiyaa biyyattii keessatti anniisaa elektriikii fayyadamuuf hammeentaan dhiyeessii hir'ifamuuf ture fooyya'uun isaas himameera.
Warshaan maddisiisa anniisaa elektriikii Raphii (kan kosii magaala Finfinnee irraa anniisaa maddisiisu) ji'oota sadeen darbanif itti fufiinsaan anniisaa maddisiisaa turuunsaas himameera.